Meizu M5s dia haseho amin'ny herinandro ambony amin'ny hetsika | Androidsis
Manuel Ramirez | | Meizu, About us
Smartphone vaovao Meizu dia vonona hiseho amin'ny herinandro ambony. Nanomboka nandefa fanasana ho an'ilay hetsika ny orinasa sinoa, izay kasaina amin'ny 15 febroary. Fanendrena iray manan-danja iray hafa ho an'ny iray amin'ireo marika izay avy any Shina izay mahaliana indrindra ny besinimaro.
Ny sary fanasana dia mampiharihary ny iray amin'ireo singa mampiavaka ny fitaovana, ary tsy iza izany fa ny mamaly haingana; iray amin'ireo tombony lehibe lehibe ananantsika ankehitriny amin'ny finday avo lenta, rehefa mitohy tsy mampivoatra ny teknolojia bateria.
Na dia tsy manambara manokana ny anaran'ny telefaona iray aza ilay fanasana, dia mety ihany ny hiheverana izany ny M5 no kintana amin'ny hetsika. Ny fitaovana dia efa nandalo TENAA, hita tato ho ato izy io amin'ny fitaovana benchmarking isan-karazany sy amin'ny sary tafaporitsaka isan-karazany.
Mikasika ny fepetra arahana dia fantatsika fa fitaovana hanana a octa-core Chip MediaTek MT6753 voahodina amin'ny 1,3 GHz, manana fampisehoana HD 5,2-inch, RAM 3GB, ary tahiry anatiny 32GB ho fototra. Mazava ho azy, azonao atao ny miditra amin'ny variant izay hilalao ny karatra misy RAM 4 GB sy memoara anatiny 64 GB.
Ny telefaona koa dia miavaka amin'ny a Kombo fakan-tsary 13MP ho an'ny aoriana sy 5MP ho an'ny eo aloha. Ny bateria manana fahaizana 2,930 mAh dia hiezaka hitondra an'ity telefaona ity hatramin'ny daty, izay mety manana vidiny eo anelanelan'ny 150 sy 220 dolara.
Fantsona mahaliana iray hafa izay avy any Meizu, izay miaraka amin'ny OPPO, Xiaomi ary marika sinoa maro hafa manao izay sarotra be Orinasa malaza toa an'i Samsung, LG na Apple aza. Taona vitsivitsy izay nitana andraikitra lehibe ho an'ny finday avo lenta i Shina, tsy ho an'ireo marika ireo ihany.
Aza adino ny famerenana M3 Note.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Meizu M5s vonona hiseho amin'ny herinandro ambony
Samsung dia nanemotra ny fanapahan-kevitra stratejika noho ny famotopotorana ny kolikoly